Goodvibes: Ngwa magburu onwe ya iji gee ihe ọdịyo sitere na ntanetị | Site na Linux
Goodvibes: Ngwa di oke nma ige nti odi na ntaneti
N'ezie mgbe onye ọrụ chọrọ rie (lelee / gee ntị) ọdịnaya ọtụtụ mgbasa ozi n'ịntanetị, n'agbanyeghị ụdị Usoro njikwa nwere, ya bụ, ọ bụrụ na ọ bụ nke aka, mechiri emechi ma ọ bụ nke azụmahịa ma ọ bụ n'efu, mepere emepe na n'efu, o yikarịrị ka ị ga-emeghe ihe nchọgharị weebụ ịchọrọ ma jikọọ na weebụsaịtị ị họọrọ iji nweta ya.
Otú ọ dị, ndị ngwa desktọpụ, ma na nbudata ma na ilele nke ọdịnaya kwuru, iji zere iji ihe Nchọgharị weebụ, nke na-eripịa ọtụtụ akụ, dị ka CPU, RAM na bandwit. N'ime ngwa ọdịnala dị, otu n'ime ha bụ Ezigbo, nke bụ ngwa dị mfe ma dị fechaa maka GNU / Linux nke na-enye anyị ohere ige ntị na ntanetị site na easilyntanetị, ma na ntanetị site na ntanetị site na ihe atụ redio, na offline dị ka pọdkastị edere.
Audio edekọ: Bara uru ngwa ka ịdekọ ọdịyo ma mee pọdkastị
Okwesiri iburu n'uche na n'oge na-adịbeghị anya anyị kwukwara banyere onye ọzọ mfe na ìhè ngwa metụtara nchịkwa ọdịyo na pọdkastịkpọọ Onye na-edekọ ọdịyo, nke anyị na-akwado ka ị gụọ ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme ya n'oge ahụ, site na ịpị njikọ ndị a n'okpuru:
"Audio edekọ bụ un fabulous mmemme maka ịdekọba ụda (ụda) na kọmputa. Ngwaọrụ a na - enye onye ọrụ ohere ịdekọ ụda site na ngwaọrụ dịka igwe okwu, kamera weebụ, kaadị ụda, yana site na ngwa dịka igwe egwu multimedia ma ọ bụ ihe nchọgharị ,ntanetị, n'etiti ndị ọzọ.".
1 Goodvibes: Ntanetị Igwe Ọdụ Internetntanetị
1.1 Gịnị bụ Goodvibes?
Goodvibes: Ntanetị Igwe Ọdụ Internetntanetị
Gịnị bụ Goodvibes?
Na-ekwu banyere ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, ọ na-eji nkenke oge kọwaa ya onye nrụpụta dị ka ndị a:
"Goodvibes bụ igwe ntanetị redio dị fechaa nke GNU / Linux. N'ime ya ị nwere ike ịchekwa ọdụ ụgbọ kachasị amasị gị naanị site na itinye ha, nke ahụ niile. Ngwa a enweghị ọrụ ọ bụla iji chọọ ụlọ ọrụ redio, ị ga-abanye URL nke ụda iyi ahụ n'onwe gị. Ọ dịghị mfe iji, amaara m, mana ịme karịa karịa nke ahụ adịghị mfe".
Ugbu a, na ọhụrụ anụ version dị bụ nọmba 0.6, nke nwere ike ibudata ozugbo maka mkpokọta site na iji gaa, dị ka ebe nrụọrụ weebụ gị gosipụtara na gị nwụnye ngalaba. Enwekwara ike itinye ya ozugbo site na nchekwa nke ọtụtụ n'ime GNU / Linux Distros, dị ka m si dị n'aka m Distro MX Linux, na-enwe ekele na nke dịnụ bụ nọmba mbipute 0.4.2.
Otu ihe ahụ, ejiri m iwu dị mfe awụnyere ya: «sudo apt install goodvibes». Otú ọ dị, maka ozi ndị ọzọ, ị nwere ike ịga ya ukara na saịtị na GitLab y GitHub.
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo ahụ ozugbo n'elu, isi interface dị ntakịrị ma ọ bụ dị ọcha, o nwere ụlọ elu yana ngalaba 2:
Na nkebi nke mbụ a, ị ga - ahụ nhọrọ ndị a:
Tinye ọdụ: Iji tinye Aha na URI (adreesị weebụ) nke isi iyi ọdịyo dị n'ịntanetị, ọ ga-abụ iyi egwu ma ọ bụ faịlụ static ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe.
preferences: Iji gosipụta windo nwere nhọrọ 3 ndị ọzọ, nke a na - akpọ Misc, Ngosipụta na Njikwa, na, ihe ndị ọzọ, jikwaa mmeputakwa na mmekọrịta ya na D-Bus, jikwaa mmekọrịta ya na eserese eserese na nhụta ya anya, ma jikwaa mmekọrịta Hoykeys na kiiboodu.
Mechie GUI: Iji na-emechi (zoo) ngwa si GUI-emechi na-agba ọsọ ọdịyo iyi.
Zọ ọpụpụ: Iji mechie ngwa ahụ.
Na nkebi nke abụọ a ị ga-ahụ nhọrọ ndị a:
Enyemaka n'ịntanetị: Iji mepee gọọmentị gọọmentị na GitLab ka ndị ọrụ wee nwee ike ịnweta ngwa ngwa.
Ihe: Iji gosipụta windo ozi ahụ, egosiri na onyonyo ahụ ozugbo.
Na mmasị window, n'ụzọ zuru ezu, enwere ike ijikwa ihe ndị a:
Multimedia isi nkwado: Igodo , na nke dị na ọtụtụ ahụigodo.
Ma Ọkwa: Ozi na-egosi mgbe egwu gbanwere.
Nhọrọ ịghara ịkwụsịtụ: Iji gbochie usoro ịkwụsịtụ ya mgbe redio na-akpọ.
Ọrụ Autoplay: Iji malite ịkpọ redio kacha ọhụrụ mgbe ngwa ahụ malitere.
Nkwado MPRIS2: Maka ijikọta nke ọma na desktọọpụ ọgbara ọhụrụ.
E wezụga nke ahụ onye nrụpụta kwuo ihe ndị a:
"Maka ndị gị na-ebikarị na ọdụ ma zere ihu ọrụ njirimara, ị kwesịrị ịma na ị nwere ike iwulite Goodvibes na-enweghị GUI, ma jikwaa ya site na onye ahịa ahịa enyere.".
M n'onwe m gbalịrị ọtụtụ redio dị na ntanetị, na ihe niile magburu onwe. Mana ihe kacha masị m bụ inwe ike ịdekọ ya URL Podcast na ahọpụtawo m ka m bụrụ ihe akaebe. Ọ bụghị weebụsaịtị niile na-enye a URI ma ọ bụ tinye URL iripusi ike ma ọ bụ static audio iyi nke a ndekọ redio ma ọ bụ pọdkastị, Ya mere atọ (mbanye anataghị ikike) jiri m bụ ihe ndị a, mgbe anaghị m enweta URI ma ọ bụ URL:
"M na-eji ngwa mgbakwunye ebudata dị ka Video DownloadHelper, iji malite nbudata nke faịlụ ọdịyo nke nwere iyi egwu dị egwu ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe, mgbe ahụ m detuo njikọ nbudata ya ma kwụsị nbudata ahụ, wee banye otu na URI. Yabụ enwere m ike ịnụ Podcast na redio ụfọdụ sitere na Goodvibes".
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Goodvibes», nke bụ ngwa dị mfe ma dị mfe maka GNU / Linux nke na-enye anyị ohere ige ntị na ntanetị site na ,ntanetị, ma na ntanetị site na iyi site na, dịka ọmụmaatụ, redio, yana offline dị ka pọdkastị edegogo; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Goodvibes: Ngwa di oke nma ige nti odi na ntaneti
A na-enwe ekele maka isiokwu ndị dị otú a. Iji gee redio Internetntanetị, ejiri m ngwa ngwa Pyradio, nke na-adịghị eripịa akụ. Mana maka ihe ụfọdụ, agbataghị m ịwụnye ya na MX Linux (ọ ga-abụrịrị ihe metụtara Pip). N'ụzọ dị ịtụnanya, ejisiri m ike wụnye ya na BunsenLabs, dịkwa na Debian Buster.
Achọpụtara ụdị nke RansomEXX maka Linux
Bountysource: Platform Ego maka Open Source Software